चाडपर्वमा पनि अपेक्षाकृत बिक्री भएनन् गाडी, के होला यसको असर ? – Arthik Awaj
चाडपर्वमा पनि अपेक्षाकृत बिक्री भएनन् गाडी, के होला यसको असर ?
अन्तिम अध्यावधिक: July 12, 2020 - 11:12 am (+05:45)
By आर्थिक आवाज	 २०७६ कार्तिक २१ गते बिहीबार ०८:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । यस वर्षको दशैं लगायतका चाडपर्वमा सवारी साधनको बिक्री बिगतका वर्षहरुको तुलनामा निकै कम भएको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तो यस वर्ष सवारी साधनको कारोबार उल्लेख्य मात्रामा हुन नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
नजिकको हाम्रो छिमेकी देश भारतमा सवारीसाधनको बिक्रीमा मन्दी आएको खबर सुनिरहेका नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायीहरु आफ्नै देशमा समेत यस्तो अवस्था आउने अनुमान गर्न थालेका छन् । सवारीसाधन बिक्री हुने मुख्य सिजन दशैंमा नै सोचेभन्दा निकै कम कारोबार हुँदा यसले अटो क्षेत्रमै दीर्घकालीन मन्दीको शुरुवात भएको हो कि भन्ने उनीहरुले शंका समेत गर्न थालेका छन् । दशैभन्दा केही समय अगाडि सम्पन्न नाडा अटो शोमा विगतका बर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष कारोबार निकै कम भएको बताएका उनीहरुले दशैंमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर दशैमा पनि कारोबार सोचे अनुसार हुन नसकेपछि उनीहरु निराश भएका हुन् । व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस बर्षको दशैं तिहारमा आधा भन्दा बढीले कारोबार कम भएको हो ।
नेपालमा आधिकारिक विक्रेता कम्पनीले सवारीसाधन आयात गरी देशका विभिन्न भागमा डिलरमार्फत सवारीसाधन बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । करोडौं रकम लगानी गरी डिलरसिप लिएका त्यस्ता डिलरहरु अहिलेको अवस्थाबाट बढी मर्कामा पर्न थालेका छन्